Muxuu yahay qorshaha muranka dhaliyey ee uu wado Erdogan? | Warbaahinta Ayaamaha
Muxuu yahay qorshaha muranka dhaliyey ee uu wado Erdogan?
MUQDISHO-AYAAMAHA-Madaxweynaha Turkiga RecepTayyip Erdogan ayaa dhawaan xarigga ka jaray mashruuc kanaal looga dhisayo magaalada Istanbul si loo yareeyo saxmadda ka dhalatay marinka mashuuqlka badan ee ku ee ku yaalla gacanka magaaladaas.
Mashruucan oo kacaya 15 bilyan oo doolar ayuu Erdogan ku sheegay mid lagu han-weyn yahay isla markaana ka shaqeynayo danaha shacabka ku nool dalkaas.
“Waxaan u aragnaa mashruuca kanaalka Istanbul in uu yahay midkii mustaqbalka badbaadin lahaa magaalada, waxaan fureynaa bog cusub oo ku saabsan taariikhda horumarka Turkiga” ayuu yiri Erdogan xilli uu ka hadlayay munaasabadda lagu dhagax dhigayay mashruuca.
Sida laga soo xigtay dowladda Turkiga, mashruuca wuxuu qaadaan ilaa lix sano balse dadka dhaleeceeyo arrintani ayaa ku tilmaamay in mashruuca uu saameyn ku yeelan doono deegaanka.
Dadka dhaleeceya mashruucan ayaa ku tilmaamay mid ‘waalli ah’ oo waxyeelleyn u geysanayo bilicda deegaanka iyo biyaha.
Halka dadka qaar ay ku andacoonayaan in mashruucan uu Turkiga u horseedi doono in deymo badan uu soo amaahdo.
Waxay ku doodayaan in mashruuca uu burburin doono nolaha badda iyo isla markaana uu halis gelin karo biyaha macaan ay helaan shacabka Istanbul.
Qaar kamid ah saraakiisha uga sarreysa ee ka shaqeeya bangiyada Turkiga ayaa sheegay in qaar kamid ah bangiyada ugu weyn ee ka jira dalkaas in aysan dan ka laheyn maalgelinta mashruuca maadama ay walaac ka muujinayaan dhibaata deegaan iyo midda dhaqaale ee ka dhalan karta, sida ay ku warrantay Reuters.
Marinka Bosphorus oo ay aad u isticmaalaan maraakiibta, waa goobta kaliya ee biyo ah ee Badda Madow ku xirta badda Mediterranean-ka.
Kanaalka qorshihiisa xarigga laga jaray ayaa noqon doona marin kale.
Haataan waxaa Bosphorus sanadkiiba maraa 43,000 oo maraakiib ah kuwaas oo ciriiri kala kulma marinka, wakhti badan ku qaata halkaas, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.